प्रदेश प्रमुखले किन पाएनन् झन्डावाल गाडी ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रदेश प्रमुखले किन पाएनन् झन्डावाल गाडी ?
काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले कस्तो खालको राष्ट्रिय झन्डा राख्ने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा सातै प्रदेशका प्रमुख चार दिनदेखि झन्डाविहीन गाडीमा हुइँकिइरहेका छन् । प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह मान्यता दिइए पनि गृहका कर्मचारीले ‘ध्यान दिन नसक्दा’ प्रदेश प्रमुखहरू झन्डावाल गाडी चढ्नबाट वञ्चित भएका हुन्। प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी व्यवस्था पहिलोपटक गरिएकाले तत्काल झन्डाको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले बताए।
अाजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले खबर छापेको छ ।
हट्यो लोडसेडिङ, १३ हजारको चुल्हो ४ हजारमा पनि बिकेन
काठमाडौँ । भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला चीन सरकारले उपलब्ध गराएको विद्युतीय चुल्हो (इन्डक्सन)को सरकारले […]
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा सरकारले १० खर्ब ४९ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे पनि वास्तविक खर्च भने […]
काठमाडौँ । प्रदेश १ एक घन्टा अलपत्र परे सांसद प्रदेश १ का सांसदलाई आइतबार बिहान १० बजे विराटनगरस्थित […]
बाम गठबन्धनविरुद्ध मधेसी रिझाउँदै कांग्रेस, यस्तो छ चुनावी आकलन
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कांग्रेस, संघीय समाजवादी फोरम र राजपाबीच तालमेल हुने भएको छ । […]
काठमाडौँ । सरकारले जग्गा र जग्गाधनीको विवरण समेटिएको पुरानो लालपुर्जा विस्थापित गरी ‘स्मार्ट लालपुर्जा’ […]
गोल गर्नेक्रममा रोनाल्डोको आँखाबाट रगत बग्यो (भिडियोसहित)